Home Wararka Maxeey ku kala duwan-yihiin DG Galmudug & Hirshabeelle
Maxeey ku kala duwan-yihiin DG Galmudug & Hirshabeelle
Madaxweynayaasha dowlad goboledyada Galmudug iyo Hirshabelle Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor iyo Cali Cabdullahi Xuseen Guudlaawe oo maalmihii dambe Muqdisho ku sugnaa ayaa xalay kulan kula qaatay wasiirrada mamulladooda ugu jira xukuumadda federaalka Soomaaliya.
Kulankaan oo qaatay saacado ayaa inta uu socday waxa ay labada dhinac uga hadleen xaalada siyaasadeed ee dalka, sida amniga iyo doorashooyinka ee deegaanada ay metelaan oo xilligan ka mid ah meelaha ugu liita dalka hadii la yiraahdo arrimo amni, iyo mid horumar intaba.
Arrimaha ugu weyn ee diiradda la saaray kulankii xalay waxaa ka mid ahaa sidii looga wada shaqeyn lahaa dhinacyada amniga iyo doorashooyinka soo socda, si ammaan uga dhici la haayeen xilli ay muran xoogan ka taaganyahay arrimaha doorashada Soomaaliya.
Wasiirrada ayaa ka dalbaday Madaxweynayaasha labada dowlad goboleed inay raadiyaan xuquuqda matalaadda gobolka Banaadir, iyagoo ka faa’ideysanaya u dhowaanshahooda xilligan ee dowladda federaalka, inkastoo heshiiskii doorashada ee lagu saxiixay Muqdisho 17-kii September ee 2020 aanu qeyb ka aheyn arrinta matalaada gobolka Banaadir oo aan haba yaraatee heshiiskaas lagu soo darin.
Dhaqanka siyaasiyiinta iyo odayaaaaaha beesha hawiye ayaa ku eedeeyey madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir in ay ka gaabiyeen in ay raadiyaan matalaada gobolka Banaadir, madaama qeyb ay ka ahaayeen heshiiskii doorashooyinka ee la gaaray 17-ki bishii Sebtember ee sanadkii tagay 2020.